eNasha.com - संसारकै बूढी ब्लगर !
संसारकै बूढी ब्लगर !
स्पेनकी एक हजुरआमालाई हिजोआज ब्लग लेख्न निकै रुचि लाग्न थालेको छ । र, यो लेखाई अहिले संसारभर चाखका साथ हेर्न थालिएको छ । उनलाई केही व्यक्तिहरुले त संसारकै बूढी ब्लगरको उपमा दिइसकेका छन् ।
"आज मेरो जन्म दिन र मेरो नाति, जो प्रायः कुनै कुरामा पनि सजिलो थिएन, उसले मलाई ब्लग उपहार दियो", बूढी हजुरआमा मारिया एमेलिया लोपेज, ९५, ले आफ्नो ब्लगमा पहिलो भावना व्यक्त गरेकी छिन् । अहिले उनको यो लेखाई मान्छेहरुले चाखका साथ हेरेपछि उनी एकाएक साइबर सेलिब्रिटी बन्न पुगेकी छिन् । उनी यसअघि साइबरबारे 'सी' पनि जान्दैनथिइन् ।
"शुरुमा त मैले यसलाई कागजमा नोटबुक लेखेझैँ सोचेकी थिएँ तर त्यति मात्र होइन रहेछ !" लोपेजले बताइन् ।
"जब मैले मेरा नातिहरुले इन्टरनेट प्रयोग गरेको देखेँ, यसले मेरो ध्यान खिँच्यो । मैले आफैँलाई सोधेँ, यो के अचम्म हो - यसमा जे पनि जस्तो पनि फेला पार्न सकिने ! उसो भए मलाई पनि चाहियो इन्टरनेट !" उनले ब्लगमा लेखेकी छिन् ।
अहिलेसम्म उनका ६० हजार नियमित पाठक छन् । लोपेजले त्यस ब्लग ( http://amis95.blogspot.com) मा घरका कुराहरु, गफगाफहरु त्यसमा राखेकी छिन् । नियमित पाठकहरुले उनका भनाइमा प्रतिक्रिया पनि दिइरहेकाले उनलाई ज्यादै अचम्म लागिरहेका छन्- आफूभन्दा साना संसारभरका सोच्दै नसोचेका व्यक्तिहरुको भनाइ प्रत्यक्ष पढ्न पाएर ।
"म जस्ती बूढीलाई कसले पो ध्यान देला र ! दिँदैनन् पनि । बूढा मान्छेलाई धेरैले माया पनि गर्दैनन् । तर इन्टरनेटले मलाई अचम्ममा पारेको छ । किनभने चाहे १४, १५ या १८ वर्षको व्यक्ति वा तरुना तन्नेरीहरुले तिनको जीवनशैलीबारे बताइरहेका हुन्छन् र तिनको सोचाई अनि हाम्रो सुझाव कुरिरहेका हुन्छन्", उनले एपीसँगको कुराकानीमा बताइन् ।
एक तथ्याङ्क अनुसार स्पेनमा ६५ वर्ष उमेर समूहका मात्र १० जना व्यक्तिहरुले इन्टरनेट चलाउने गरेका छन् । यो पूरा युरोपको तथ्याङ्कमा केही कमी हो । तर गत दुइ वर्षयता इन्टरनेटमा समय बिताउने बूढाबूढीहरुको संख्यामा प्रशस्त बढोत्तरी आइरहेको छ । बूढाबूढीहरुबीच डिजिटल क्रान्तिको असर निकै कम छ ।
"इन्टरनेट चलाउने कुरामा पैसा भन्दा पनि यसप्रतिको रुचिले नै बढी भूमिका खेलिरहेको हुन्छ", स्पेनका उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारी डोमिन्गो लाबोर्दाको भनाइ छ- "खासमा आय, लिङ्ग वा शैक्षिक स्तरले कुनै पनि भूमिका खेलेको हुँदैन ।" स्पेनमा ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिहरुले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने समूह अझ थोरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यता लोपेजको ब्लगमा डुल्ने डुलन्तेहरुले उनको भाषाको पूर्ण स्थानीयताका कारण रोचक बनेको बताउँछन् । यसको कारण चाहिँ लोपेजले उनको आफ्नो पुरानो बोलिरहने बानीलाई श्रेय दिएकी छिन् ।
एकै छिन उनको भनाइ पढौँ, ब्लगको । एउटा राम्रो फोटो छेउ उनले लेखेकी छिन्- "लौ हेर त, म राम्री छैन त ! तर अहिले हेर त म कस्ती भएँ । मेरा आँखा सुन्दर छैनन्, न त मेरो मुहार अनि मेरो शरीर बुढ्यौलीका कारण सुकिसकेका छन् । उमेरले मेरा सबै सौन्दर्य चुसिसकेको छ ।"
हरेक दिन ब्राजिल, रुस या जापान अनि अन्य थुप्रै देशबाट आउने दर्जनौँ प्रतिक्रियाप्रति उनी खुशी छिन् । उनले आफूलाई संसारकै बूढी ब्लगरको रुपमा चिनाउन खोजे पनि गुगल खोजीमा अष्ट्रेलियाली ओलिभ रिलेको वेबसाइटको नाम आउँछ । उनी अहिले १०८ वर्ष पुगेको बताइन्छ ।
कीर्तिमान माया सुन्दरी सेलेब्रिटी गुगल भव्यता इन्टरनेट बलिउड नग्नता मूर्ख्याइँ विज्ञापन फट्याइँ मुद्दा मामिला श्रीमानश्रीमती हलिउड उपाय परिस्थिति उदेकलाग्दो उदारता प्रविधि